Marco Asensio oo shuruud adag ku xeray sii joogistiisa Real Madrid
Wednesday, March 20th, 2019 - 17:17:44
Monday June 11, 2018 - 17:19:07 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiddiga da’da yar ee kooxda Real Madrid Marco Asensio ayaa ku hanjabay inuu kooxda ka tegi doono hadii ay lasoo wareegtociyaaryahan Neymar.
Dhoowr ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa u muuqda kuwa aan ku faraxsaneyn dalabyada kooxdaasi ay u direyso xidiga Paris Saint-Germain Neymar da Silva Santos Júnior.
Kooxda Madrid oo sedexdii sano ee lasoo dhaafay hanatay koobka Champions League ayaa xidiga kubadda cagta ugu qaalisan ee Neymar Júnior ku dooneysa aduun lacageed dhan €300 million.
Sida lagu baahiyey Majalada Diario Gol Xidiga da,da yar ee kooxda Real Madrid Marco Asensio ayaa ku hanjabay inuu kooxda isaga tegi doono hadii ay lasoo wareegto ciyaaryahan Neymar kaas oo isaga qundhiisa doonaya inuu xirto maaliyada kooxda Los Blancos.
Asensio oo 22 jira ayaa ka cabsi qaba ineey bur burto rajadii uu ka lahaa ka mid noqoshada ciyaartoyda dooqa koowaad hadii ay kooxdu lasoo wareegto ciyaaryahan Neymar Júnior oo ay isku boos ka ciyaaraan.
Ciyaaryahan Marco Asensio oo ay baadigoobayaan kooxaha Liverpool, Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa saaxiibadiis u sheegay inuu kooxda isaga tegi doono hadii ay soo iibsato ciyaaryahan Neymar oo xagaagii lasoo dhaafay kooxda PSG kula guuleystay horyaalka dalka France ee Ligue 1.